कोरोना संक्रमितकी श्रीमती ऐनाको सहयोगमा स्वयं टीका लगाउँदै
सोमवार बिहान घण्टीको टिङरिङ–टिङरिङ आवाज कानमा परेपछि निद्राबाट ब्यूझिएँ । आँखा मिच्दै बेडबाट उठ्ने कोसिस गरें । घडीले बिहानीको ६ बजाइसकेको थियो ।
कोठाको ढोका सुस्तरी खोलेर बैठक कोठामा चियाएँ । पत्नी पूजापाठमा व्यस्त रहिछिन् । किनकि सोमवार दशैं थियो । मन तरङ्गित बन्यो । छुट्टै उत्साह र उमङ्ग सञ्चार भयो । आफूलाई नै बिर्सने प्रयास गरें ।
कोठाको ४ दिवालभित्र खुम्चिएर बस्ने, सुत्ने, उठ्ने गर्न थालेको ठीक २२ दिन भइसकेको छ । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिमबाट बच्दाबच्दै ९ महिना जसोतसो गुजारिसकेको थिएँ । फ्रन्टलाइनमै रहेर आफ्नो दैनन्दिन क्रियाकलाप गर्नुपर्ने पेशा भएकाले जोखिम भने थियो । कोरोना संक्रमण, यसको जोखिम र नियन्त्रणका उपाय, संक्रमितकै अनुभव, यसबाट बच्ने उपाय, कोरोनाले निम्ताएको कहरका अलावा विभिन्न अवयवको रिपोर्टिङ आफू आबद्ध सञ्चारमाध्यममा नियमित रूपमा गर्दै आएको थिएँ ।
यत्तिकैमा गत असोज १९ गते कोरोना कहरले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विषयक अन्तक्र्रियामा सरिक भएँ । त्यहाँ सञ्चारमाध्यमका साथीलाई पनि सीमित संख्यामा आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक सहकर्मीमा अर्को हप्ता कोभिड–१९ संक्रमण देखियो । उनीसँग त्यो कार्यक्रमका अलावा बीचमा पनि २ पल्टसम्म नजिकबाटै भेट भएको थियो । एकपटक दुवैले मास्क लगाएका थिएनौं । त्यो हाम्रो गल्ती थियो ।
कोरोना लक्षण देखा परेपछि उनले असोज २३ गते स्वाब दिए । २ दिनपछि असोज २५ गते पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि म पनि स्वतः कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परें । बुझ्दै जाँदा असोज १९ गते पेशागत समूहसँगका सहकर्मीबीच एउटा कोठामा मिटिङ रहेछ । त्यहाँ सहभागीमध्ये १ जना पहिले नै संक्रमित भइसकेका रहेछन् ।
मास्क नलगाउने वा लगाएर पनि नाकमुख नछोपेका उनीसहित केही साथीहरू पनि एकपछि अर्को संक्रमित बने । घरकोठामै आइसोलेसन बसे । मास्क लगाएर स्वास्थ्य सचेतना अपनाउनेहरू भने संक्रमणबाट जोगिए ।
सम्भवतः मलाई पनि कोरोना सरेको हुनसक्ने आशंकाले विचलित बनें । उनले स्वाब दिएको असोज २३ गतेदेखि नै म पनि डेराकोठामा क्वारेन्टीन रहें । मैले पनि क्वारेन्टीन बसेको १ हप्तापछि असोज २९ गते स्वाब दिएँ । रिपोर्ट पर्खाइमा मिनेट–मिनेट गन्दै बसें । १–२ दिनभित्र रिपोर्ट आउने स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी दिएका थिए तर आएन । २ दिन कट्यो, रिपोर्ट आएन । तेस्रो र चौथो दिन पनि आएन । मैले क्वारेन्टीन बसेकै अवस्थामा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि २ दिनमा आउने भनिएको रिपोर्ट ४–४ दिनसम्म नआएपछि समाचार लेखें । केही तरंग छायो । सरोकारवाला निकाय प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसको भोलिपल्टै पाँचौ दिन अर्थात् कात्तिक ३ गते मात्र रिपोर्ट आयो ।
रिपोर्ट त आयो तर सोचेजस्तो रैनछ । रिपोर्ट पोजेटिभ आएको खबर उनै मित्रले पहिलोपल्ट सुनाए । त्यो नमिठो खबरले ल्यापटपमा समाचार लेख्दै गरेको बेला की–बोर्डमा मेरा औंला लरबराए । शिथिल बने । शुरूआतमा केही सोच्नै सकिनँ । सामान्य रुघाखोकीबाहेक कोरोनाको अन्य खासै लक्षण नदेखिएकाले रिपोर्ट नेगेटिभ आउला भन्ने आशामै थिए । भयो ठीक उल्टो । शुरूआतमा सो खबर झूटा होस् भन्ने ठानें । पत्याइनँ पनि । भेरिफाइड नभइकन बरु समाचारै नलेख्ने बानी पहिलेदेखिकै हो । पछि पीसीआर परीक्षण केन्द्रका प्राविधिकसँग बुझें । टेलिफोनमा ल्याब प्रमुखले मेरो नाम, उमेर र ठेगाना हुबहु मिलेको बताउँदै उही ‘पोजेटिभ’ बोलिन् ।
उनले भनिन्, ‘तपाईंलाई गाह्रो भए अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ । नभए घरमै सुरक्षित ढंगले बस्नुहोला । श्वास फेर्न गाह्रोसाह्रो भए सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिलाई खबर गर्नू । परिवारका सदस्यसँग टाढा बस्नू ।’
मैले केही जवाफ दिन सकिनँ । ‘हवस्’ मात्र भनें र फोन राखें । त्यतिबेला साँझको पौने ६ बजिसकेको थियो ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनसँगै नियमित रूपमा कोरोना रिपोर्टिङ गर्दै आएको म आफैं समाचार बन्ने भएँ । स्वास्थ्य निर्देशनालयले कात्तिक ३ गते साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमितको सूचीमा मेरो पनि उमेर र ठेगाना सही मिलेर आयो । संक्रमित सूचीमा थपिएँ । उता संक्रमित संख्या १ बढ्दा मेरो मुटुको धड्कन पनि बढ्यो ।
अब के गर्ने ? सोच्नै सकिनँ । नजिकै रहेका २ छोराको अबोध अनुहार हेरें । घरमा क्वारेन्टीन बस्दादेखि नै मास्क नियमित लगाएको थिएँ । प्रतिकूल रिपोर्टले झनै सचेत बन्ने प्रयास गरें । छोराहरूबाट टाढा रहें । भगवान् उनीहरूलाई मबाट कोरोना नसरेको होस् भनी कामना गरें । गाउँमा रहेका बूढा बाआमा सम्झें । श्रीमती ड्यूटीमै थिइन् । उनी बैंकर हुन् । हत्तपत्त बिदा नमिल्ने, बिहानीको खाना खुवाएर छोराहरू र मलाई दिउँसोमा भोक लाग्दा खानेकुरा (विशेषगरी फलफूल, फास्टफूड खाना) अलग्गै राखेर जान्थिन् । यसो गर्न थालेको १० दिन बितिसकेको थियो । उनलाई समेत फोन गर्न सकिनँ । भाइबुहारी पनि एउटै शहरमै थिइन् । नमिठो खबर तत्काल भन्ने मन भएन । बेचैन मन बोकेर बेडमा पल्टिएँ । पछिल्लो हप्ता आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पर्क आएका केही व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेको जानकारीसम्म दिएँ ।
दशैंको बेलामा बुनिएका आगामी योजना सर्सर्ती आए । मिडियाको लागि दशैंलाई ‘रिजर्भ’ राख्नुपर्ने स्टोरी लेख्नुपर्ने थियो । बीचमा विषय केलाउँदै थिएँ तर सबै चकनाचूर भए । क्वारेन्टीन बसाइँ अब आइसोलेसनमा स्तरोन्नति भयो ।
वर्षदिनमा एकपल्ट आउने विजयादशमीको लागि कोठाको अँध्यारो एउटा कुनामा घटनास्थापनामा पूजापाठ गरेर श्रीमतीले जमरा छरेकी थिइन् । बल्ल ३ दिन भएको रैछ । अब ती जमरा यसै ओइलाउने भए भन्ने लाग्यो । जन्मेदेखि गाउँमा दशैं मनाउँदै आएकोमा ३ वर्षयता फर्किन पाएको थिइनँ । परिस्थिति अनुकूल नहुँदा यसअघिका २ दशैं शहरमै बितेका थिए । बाआमा गाउँबाट कोसेली बोकेर हामीलाई टीका लगाउन शहरमै आउनुभएको थियो ।
यसपालि कोरोना कहरबीच स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर गाडी रिभर्ज गरेरै भए पनि गाउँ जाने योजना पहिले नै बनिसकेको थियो । बिहान हिँड्यो भने साँझमा घर पुगिन्थ्यो । सार्वजनिक यातायातमा भीडभाड हुने भएकोले कोरोना संक्रमणको जोखिम थियो ।
अब भने कोरोना कोठाभित्र छिरिसकेपछि गाउँ जाने र दशैंमा रमाइलो गर्ने योजना सिसा फुटेसरी फुट्यो । त्यति मात्र कहाँ हो र ? जीवन नै रहला वा नरहला भन्ने डर–त्रासले झनै बेचैन बनायो । आफ्नो जिम्मेवारी महसूस गर्दै कोरोना जित्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त आत्मविश्वास बटुल्ने खोज्थें ।
राति ७ बजेपछि मात्र बैंकर श्रीमती कोठामा भित्रिइन् । उमेर ८ र ३ वर्षका अबोध छोराहरू अर्को कोठामा खेलिरहेका थिएँ ।
म क्वारेन्टीन बस्दै गरेको कोठाको ढोका सुस्तरी खोलेर सोधिन् – ‘रिपोर्ट आयो ?’
अफिसबाट फर्केपछि उनले पछिल्ला ३ दिन लगातार यही प्रश्न सोध्दै आएकी थिइन् ।
अहिले चाहिँ ‘आयो’ भनें ।
उनले मेरो उदास अनुहारबाटै खुट्याइन् र सोधिन् –
‘के पोजेटिभ आयो र ?’
मैले स्वीकारोक्तिको भावमा मुन्टो हल्लाएँ । केही बोलिनँ ।
मलाई सान्त्वना दिँदै सुस्तरी बोलिन् – ‘केही हुँदैन । नआत्तिनू ।’
सुनेर सान्त्वना महसूस गरें ।
‘छोराहरूलाई केही नभए हुन्थ्यो,’ उनले छोराहरूप्रति दया दर्शाइन् ।
अब भने कोरोना संक्रमितको ‘ट्याग’ लागिसकेपछि झनै सचेतना अपनाउनुपर्ने भयो । शहरको डेराकोठामा कसरी जोगिने ? कठिन थियो । उस्तै सकस पनि । आफूले काम गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई म संक्रमित भएको सूचना दिँदै आफू क्वारेन्टीन बस्नुपर्ने जानकारी दिइन् ।
अब भने व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । छोराहरू मेरो नजिक–नजिक पर्थे । उनले ३ वर्षको सानो छोरालाई भने खानपिन वा सुताउन नछोइ नहुने थियो । भौतिक दूरी कायम गर्न असम्भव थियो । जे त होला भन्ने भावमा उनीहरू आमा र छोराहरू सँगै एउटा कोठामा बसें । म पहिलेदेखि नै अर्को कोठामा थिएँ । डेराको तल्लो फ्ल्याटमा हामीहरू बस्थ्यौं । छिमेकका एक विद्यार्थी दशैंलाई घर फर्किसकेका थिए । माथिल्लो फ्ल्याटमा घरधनी बस्थे । पानी धारा, शौचालय र फ्ल्याट नै फरक भएपछि उनीहरूबाट सहजै टाढा हुन सकिन्थ्यो । त्यसैले पनि उनीहरूलाई म संक्रमित भएको जानकारी नदिने निधो गर्‍यौं र अझै टाढा रह्यौं । डेरामा कोरोना संक्रमित हुँदा नराम्रो सोच्लान् भन्ने डर थियो पनि ।
म संक्रमित भएको जानकारीको २ दिनपछि कात्तिक ५ गतेमा परिवारका सदस्यको पीसीआर भयो । रिपोर्ट २ दिनपछि नै आयो । भाग्यवश रिपोर्ट नेगेटिभ थियो ।
यो खबरले मेरो आधा खुशी फर्कियो । भगवान्ले हाम्रो पुकार सुनेछन् क्यारे, सँगै एउटै कोठामा रहने बस्नेहरूको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण नभएको पाएपछि दशैं अलि–अलि आएजस्तो भो । म चाहिँ १४ दिन आइसोलेसन बस्नुपर्ने भयो ।
दशैंको पहलपहल भित्रिसकेको थियो । ठीक १ हप्तापछि कात्तिक १० गते दशैंको टीका थियो । मानिसहरू शहर छाडेर गाउँ फर्किंदै थिए । विगतमा जस्तो गाउँ फर्किनेको लर्को नरहे पनि यसपालि मास्क लगाएर कोरोनाबाट जोगिँदै मानिसहरू शहर छाडेको दृश्य विभिन्न अनलाइनबाट थाहा पाउँथें । किनकि एक मात्र साथी मोबाइल थियो ।
फेसबूक, म्यासेन्जरमा कमिलाका ताँतीझैं ‘गेट वेल सुन’को कामना आइरहेका थिए । सकेसम्म धन्यवादसहित जवाफ फर्काउने कोसिस गर्थें । आफू कोरोना संक्रमित भएको खबर सार्वजनिक रूपमा नगराए पनि एकबाट अर्कोले क्रमशः थाहा पाएछन् । मोबाइलको घन्टी तारन्तार बज्न थालेपछि कतिपल्ट स्वीच अफ नै गर्थें र घण्टौं सुत्थें ।
बिहान ६ बजेसम्म उठ्यो, गुर्जोपानी आयो, केही समय योगा र ध्यान बस्यो । मनतातो पानीमा कागती र मह मिलाएर खायो । हल्का खाना खायो । दिनको २ पटकसम्म वाफ लियो, एकछिन सूर्यको किरणमा ज्यान न्यानो बनायो । राति सुत्ने बेलामा बेसारपानी खायो । कोरोना संक्रमित बनेपछि हल्का रुघाखोकी र क्षणक्षणमा ज्वरो आउँथ्यो ।
नजिकका साथीभाइले थाहा पाएपनि गाउँमा बाआमा म संक्रमित भएकोबारे अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उमेरले ७० वर्ष काटिसक्नुभएका बुवा गत वर्ष ‘हर्ट अट्याक’ शिकार हुनुभएको थियो । चिकित्सकको सल्लाहमा केही महिना फिजियोथेरापीपछि अहिले केही निको छ । आमालाई घुँडा दुख्ने समस्या पहिलेदेखि नै हो । यसपालि नाति–नातिना लिएर छोराहरू टीका थाप्न आउलान् कि भन्ने आश उहाँहरूमा थियो । तर अब हामीहरू गाउँ फर्किने अवस्था रहेन । मलाई एक्लै छाडेर श्रीमती र छोराहरू पनि जान पाएनन् । उनीहरूको दशैं कोठामै खुम्चियो । भाइबुहारी सप्तमीको दिन मोटरसाइकल चढेर गाउँ गए । मैले नै उनीहरूलाई पठाए । उनीहरू गएपछि बाआमालाई केही सान्त्वना मिल्यो होला भन्ने अनुभूत गरें ।
मेरो भने बाआमाको हातको टीका थाप्न नपाएको पहिलो दशैं दर्र्ज हुनेवाला थियो । उमेरले साढे ३ दशक नाघिसक्दा कहिल्यै ब्रेक नभएकोमा अहिले भने रेकर्ड ब्रेक हुने पिरले नराम्ररी मन निमोठ्यो ।
दशैंको दिन भने आकाश पूरै खुलेको थियो । बिहानी सूर्यका किरण पूर्वबाट लालित्य छर्दै चम्किलो बन्दै आए । भित्ताको टेलिभिजनले दशैं धून बजायो । छिनछिनमा दशैंका गीत बज्न थाले । नारायण रायमाझीको स्वरमा नयाँ भर्सनको गीत ‘नमुछे आमा दहीमा टीका, नछरे जमरा ...’ले सिधैं गाउँ पुर्‍यायो । समुद्रपार रहेकाहरू पनि फर्किने चाडवाडमा म स्वदेशमा रहेर पनि जान पाइनँ । अहँ यसपालि बाआमा तथा मान्यजनको हातको टीका र आशीर्वाद लिनु त कता हो कता घरकोठामै भएका श्रीमती र छोराहरूको निधारमा आशीर्वादसहित टीकाजमरा लगाउन सकिनँ ।
टीकाको साइत १०ः१९ बज्नुअभावै नुहाइधुवाइ गरी श्रीमतीले घटनास्थापनाका दिन स्थापना गरिएको घडाबाट जल अभिषेक गरिन् । छोराहरूलाई सुकिलो लुगामा सजाइन् । उनले टीकाजमरा लिएर छोराहरूलाई अघिल्तिर बसाइन् । मुखमा मास्क लगाएको मैले कोठाको ढोका हल्का खोलेर सो दृश्य टाढाबाट हेरिरहें । उनले टीका लगाइदिँदा मनले आशीर्वचन बोल्यो । उनीहरूले हल्काफुल्का भए पनि दशैं मान्न पाएकोमा केही सन्तोष बनें ।
अब श्रीमतीलाई टीका लगाउने मानिस पाइएन । मजस्तै उनको निधार पनि खाली हुने भयो । गाउँमा बाआमालाई म्यासेन्जरबाट कल गर्ने कुरा भयो । भाइको मोबाइलमा बाआमा हातमा टीकाजमरा लिएको थालीमा देखिनुभयो । भर्चुअल माध्यमबाटै आशीर्वाद दिनुभयो । दराजको ठूलो सिसा अगाडि उभिएर श्रीमती आफैंले निधारमा रातो टीका पोतिन् र एउटा पातमा मेरो नजिक टीकाजमरा फुत्त बढाइदिइन् ।
शुरूमा मैले आफैंले टीका लगाउन सकिनँ । दशैंमा यस्तो कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन । बाआमाको विवाहको १८ वर्षपछि जन्मेको म उहाँहरूको आँखामा सधैं प्यारो थिएँ । निधार खाली देखेपछि बाआमाले दुःख मान्नुहुन्छ कि भनी जसोतसो टीका लगाउने प्रयास गरें र बाआमासँग भिडियो कलमा खुशीसाथ दशैं मनाएको र टीका लगाएको भन्दै आफू स्वस्थ रहेको अभिनय गरें । ताकि उहाँहरूलाई म कोरोना संक्रमित भएको थाहा नहोस् । दशैंको उमंगमा आँसु नखसोस् । थप चोटपिर नपरोस् ।
(वैयक्तिक गोपनीयताको सम्मान गर्दै कोरोना संक्रमित लेखकको परिचय गोप्य राखिएको छ ।)
गाउँगाउँमा इजरायलको अत्याधुनिक कृषि प्रविधि : मन्त्...
५० हजार घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आज पक्राउ